Politika · Septambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Septambra, 2010
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Septambra, 2010
Azia Atsinanana 28 Septambra 2010
Nosamborina androany tany amin'ny seranam-piaramanidin'i Bangkok ny mpitantana ny vohikalan'ny gazety tsy miankina iray any Thailand, noho ny fanompàna mpanjaka. Nangingiana ny haino aman-jery mahazatra tany an-toerana momba izany fa ireo mpampiasa twitter kosa namatsy torolàlana sy fanampim-baovao hanampiana ny fanohanana ny hetsika ho fangatahana ny famotsorana ilay mafana fo voasambotra.
Amerika Latina 24 Septambra 2010
Amin'ny 26 Septambra, hifidy mba hanavaozana ny Antenimieram-pirenena ireo Venezoalana, rantsana mpanao lalàna. Iray amin'ireo fitaovana be mpampiasa mandritra ny fanentanana ny Twitter, nampiasan'ireo mpifaninana mba hanaovany ny fanentanany sy ampiasain'ny vahoaka hanohanana ny mpanao politika tiany sy hitenenany ny heviny mikasika ny politika.
Honduras: Herisetra hafa indray nataon'ny polisy
Amerika Latina 21 Septambra 2010
Juan Carlos Rivera [es] sy i Hibueras [es] no mitatitra trangam-pamoretana hafa nataon'ny polisy nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ny Mandam-panoherana tao an-tanànan'i San Pedro Sula. Nolazain'i Juan Carlos Rivera moa fa nahatrata roa alina ny isan'ny nandray anjara tamin'ny filaharambe notontosaina tamin'ny 15 Septambra. Namoaka ny sarin'ny fihetsiketsehana sy ny nataon'ny polisy...
Afrika Mainty 17 Septambra 2010